Sawirro: Lacago badan oo maalin kastaba lagu lunsan jiray garoonka Aadan Cade oo la shaaciyay tiradeeda iyo wafdi wasiiro ah oo maanta booqday garoonka
Kormerkaan oo ay maanta ku tageen Waaxda Canshuraha Garoonka Diyaradaha Aadan Cadde Wasiirka Wasaarada Warfaafinta iyo Hanuunita Dadweynaha Eng C/raxman Cumar Cusmaaan , Wasiir ku xigeenka Wasaarada Maaliyada Cabdullaahi Sheikh Cali Qaloocow iyo Wasiiru dowlaha Wasarada Maaliyada Maxamuud Xaayir Ibrahim ayaa aheyd u kuur galida howlaha shaqo oo ay halkaas ka bilabeen maamulka cusub ee dhowaan loo magcaabay Waaxda Canshuuraha ee Garoonka.
Maamulka Cusub ee dhowaan loo magcaabay Waaxda Canshuuraha ayaa ka warbixiyey howlaha shaqo ay qabteen ayagoo sheegay inay si wanaagsan shaqada u wadaan ayna soo sareen faa’iido ka badan tii hore boqolkiiba soddan muddo labo malmood gudahooda ah.
Wasiir ku xigeenka Waasarada Maaliyada xukuumadda Soomaaliya Cabdullahi Sheikh Cali Qaloocow iyo wasiiru Dowlaha Maaliyada Maxamuud Xayir Ibraahim ayaa ku dhiira galiyey dhamaan maamulka iyo shaqaalaha inay dar dar geliyaan shaqada ay u hayaan bulshada wax qabad wanaagsana la imadaan iskana ilaaliyaan wax waliba oo shaqadooda ku keenayso dhibaato.
Eng C/raxmaan Cumar Cusmaan Yariisow Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta iyo Hanuuninta dadweynaha Xukumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay inay jireyso isla xisaabtan ku aadan howlaha shaqo kuwii ka horeeyayna lala xisaab tami doono isagoo sheegay inaysan jiri doonin wax isdaba marin dambe.
“Muddo labo cisho ah canshuurta laga qaaday Qaadka soo gaara Muqdisho uu dhammaa in ka badan $130,000 taasoo u dhiganta koror ka badan $34,000 oo u dhiganta $550.000 bishii inaan la ogeyn meeshii ay aadi jirtey. Waxaana muuqata in 30% canshuurtii saxda aheyd in la lunsaday oo aan la ogeyn meel ay ku baxday. Lacagtaas aan sida sharciga ah loo xareyn ayaa looga faa’iideyn karay in mushaar $100 lagu siiyo in ka badan 5000 askar ah.” ayuu yiri wasiir Yariisow oo bidhaamiyay lacagta faraha badan ee la lunsan jiray.